ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ဖောလစ်အက်ဆစ် (Folic Acid ) သောက်သုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ချက် - Chit MayMay
Home Lotaya ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ဖောလစ်အက်ဆစ် (Folic Acid ) သောက်သုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ချက်
ကလေး ၁၀၀၀မှာ ၁ယောက်ဟာ အာရုံကြောပြွန်ချို့ယွင်းမှု (NTD) ကဲ့သို့သော anencephaly (ဦးခေါင်းခွံပါမလာတဲ့ပြဿနာ) နှင့် spina bifida(မွေးရာပါကျောရိုးချို့ယွင်းမှု) အခြေအနေတို့ဖြင့် မွေးဖွားပါတယ်။ သုတေသနပြုချက်အရ ဖောလစ်အက်ဆစ် ဖြည့်စွက်ဆေးတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကို ထိခိုက်စေသော NTD ဖြစ်နိုင်ခြေကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။
“ကိုယ်ဝန်ဆောင်စူပါဟီးရိုး”အဖြစ် ရည်ညွှန်းတဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ် (သို့) ဖောလိတ်ကို ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်နှင့် ကိုယ်ဝန်ရပြီးနောက်မှာ အမျိုးသမီးတွေ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ဖောလစ်အက်ဆစ်ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ? ဖောလစ်အက်ဆစ်အရင်းအမြစ်ကို ဘယ်ကရနိုင်မလဲ? ဘယ်အချိန်မှာ မသောက်သုံးသင့်ဘူးလဲဆိုတဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
Folic Acid ဆိုတာဘာလဲ?
ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာ သံဓါတ်ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ အစားအစာများနှင့် တခြားဖြည့်စွက်စာတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ဗီတာမင် B9 ရဲ့ ဒြပ်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်အသစ်များနဲ့ နူကလိယအက်ဆစ် (မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်း) ထုတ်လုပ်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ သွေးနီဥများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကလေးရဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုကို ပံ့ပိုးခြင်းနှင့် ကလေးရဲ့ ကြားနိုင်စွမ်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း စတဲ့တိကျသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကူညီပေးပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတောအတွင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်မရသေးခင်မှာ နေ့တိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဗီတာမင်နှင့အတူ ဖောလစ်အက်ဆစ် 400cg သောက်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဘာ့ကြောင့် Folic Acid သောက်သုံးသင့်တာလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရင် (သို့) ကိုယ်ဝန်ရဖို့ ကြိုးစားနေရင် ဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖောလစ်အက်ဆစ်ဓါတ် များများရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ အာရုံကြောပြွန်ချွတ််ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်
ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာ သန္ဓေသားရဲ့ အာရုံကြောဖွံဖြိုးမှုကို ကူညီပေးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဦးနှောက်ထဲမှာ ကြီးထွားလာတဲ့ သင့်သန္ဓေသားရဲ့ အာရုံကြောပြွန်နှင့် ကလေးရဲ့ ကျောရိုးကို ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် စတင်ဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချွတ်ယွင်းမှုများမှ ကာကွယ်ဖို့ (folic acid) ဖောလစ်အက်ဆစ်ဖြင့် ကာကွယ်ထားပါတယ်။
၂။ သွေးနီဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်
ဖောလိတ်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ သွေးနီဆဲလ်တွေ ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါ( သံဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်း)ဟာ များသောအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် သံဓါတ်က အရေးကြီးပါတယ်။ ဖောလစ်အက်ဆစ်က သံဓါတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အခြားဖြည့်စွက်စာများသောက်ရင်တောင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ သွေးနီဆဲလ် (RBC) အရေအတွက်ကို ပုံမှန်ဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်။
၃။ ကလေးအား ရောဂါသစ်များစွာ ထပ်တိုးလာခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်
ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာ ကလေးတွေမှာ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဖောလစ်အက်ဆစ်က လမစေ့ခင်မွေးဖွားခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ သားအိမ်ထဲမှာ ကလေးကြီးထွားမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် ပေါင်မပြည့်မွေးဖွားခြင်းပြဿနာများကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။
၄။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်
နေ့တိုင်း ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို အလုံအလောက်သောက်သုံးရင် ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တတ်ခြင်း၊ နှလုံးလေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာနှင့် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတွေကို တားဆီးပေးပါတယ်။
၅။ တခြားမရှိမဖြစ် လုပ်ဆောင်ချက်များ
DNA ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ဖောလစ်အက်ဆစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကလေးနှင့် အချင်းရဲ့ လျှင်မြန်စွာကြီးထွားမှုအတွက်လည်း အရေးပါပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ အရေးပါမှုအရ ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်ကတည်းက သောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Folic Acid ကိုဘယ်အချန်မှာ စသောက်သင့်သလဲ?
ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့အခါ ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို စသောက်ဖို့ ဆရာဝန်က သင့်ကို အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ပထမသုံးလပတ်မှာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်နို်ငတယ်လို့ ယူဆကြတာကြောင့် ဖောလိတ်ကို ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်ကတည်းက သောက်သုံးခြင်းဟာ အရမ်းအထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက်မှာ အကြံပြုထားသော ဖောလစ်အက်စဆစ်ကို ပုံမှန်သုံးစွဲမှုက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်မရခင် – 400mcg
ကိုယ်ဝန် ပထမသုံးလပတ် – 400mcg
ကိုယ်ဝန် ဒုတိယနှင့် တတိယသုံးလပတ်များ – 600mcg
နို့တိုက်တဲ့အဆင့် – ၅၀၀ မီလီဂရမ်
သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ အတိတ်နှင့် မိသားစုသမိုင်း၊ အခြားဖြည့်စွက်စာများ၊ သင့်မှာ ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုရှိပါက ထည့်စဉ်းစားဖို့နှင့် သင်ဘယ်လောက်သောက်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာသောက်ဖို့ လိုအပ်သလဲ?
သင်ဟာ ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို မွေးဖွားခြင်းချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်ကို လျှောချဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်လျှာက်လုံးနှင့် ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီ အနည်းဆုံးသုံးလအလိုမှ စတင်ပြီး သောက်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖောလစ်အက်ဆစ် ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ?
ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အားမရှိခြင်း၊ အသားအရေ ဖြူဖပ်ဖြူလျော်ဖြစ်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ် လျော့လာခြင်းနှင့် စိတ်တိုခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာများဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် သွေးအားနည်းရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အလယ်အလတ်ချို့တဲ့မှုမှာ ဘာရောဂါလက္ခဏာများမှ မခံစားရသော်လည်း သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဖောလိတ်ပမာဏ ကင်းမဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ဖောလိတ်ကို အစားအစာအတော်များများမှာ တွေ့နိုင်သော်လည်း ရေမှာပျော်ဝင်နိုင်ပြီး ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ အလွယ်တကူ ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အကောင်းဆုံးနည်းက အနည်းငယ်သာ ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ရင် အစိမ်းစားခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ခရိုဝေ့(ဖ်)မီးဖိုနှင့် ချက်ပြုတ်ခြင်း(သို့) ပြုတ်စားခြင်းကလည်း ကောင်းပါတယ်။
ဖော်လစ်အက်ဆစ်ကြွယ်ဝေသာ အစားအစာများမှာ – ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းနုနွယ်(131mcg)၊ နံနက်စာစီရီရယ်(100mcg) ၊ပဲဖြူလေး(101mcg)၊ ကညွတ်(89mcg)၊ ဆန်ဖြူ(90mcg)၊ ဘရပ်ဆဲပင်ပေါက်(78mcg)၊ စပါကတီ( 83mcg)၊ ထောပတ်သီး(59mcg)၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်အစိမ်း(58mcg)။
ဖောလိပ်ရဲ့ အခြားအရင်းအမြစ်အချို့မှာ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ အစိမ်းရောင်ပဲများ၊ မှို၊ ပြောင်းဖူးအချို၊ စပျစ်သီး၊ လိမ္မော်၊ ပဲ၊ အသီးဖျော်ရည်၊ အခွံမာသီးနှင့် ဥများဖြစ်ပါတယ်။
ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို ဘယ်အချိန်မှာ မသောက်သင့်တော့ဘူးလဲ?
ကလေးငယ်ရဲ့ ကျောရိုးဟာ ထိုအချိန်မှာ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန် ၁၂ပတ်ရောက်တာနှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဖော်လစ်အက်ဆစ်သောက်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ သို့သော် သင်နှင့် သင့်ကလေးကို မထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် ၁၂ပတ် လွန်သွားရင်လည်း ဖောလိပ်ကို ဆက်သောက်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleကလေးတွေရဲ့ ဝန်းကျင်မှာ ခန္ဓာကိုယ် အပြုသဘောဆောင်ခြင်းရဲ့ အရေးပါမှု
Next articleသင်မသိနိုင်တဲ့ ဘေဘီလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်သော အံ့သြစရာ (၁၀)ချက်